Xeerkee Jebiyoo Laygu Xiray? Maqaal uu Qoray Nabadoon Xarago | SAHAN ONLINE
Ugu horeyn illaah baa mahadleh. Mahadda alle ka gadaal waxa aan salaamayaa dhammaan umadda soomaaliyeed xigto iyo xigaal , caruur iyo ciroole , cuqaasha , waxgaradka , ciidanka qalabka sida , haweenka , aqoonyahannada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee Bulshada. Waxa aan rabaa in aan qoraal yar kaga faalloodo xarigii lay gaystay horaantii Bishan. Anniga oo aan ogayn illaa hadda sababta lay xiray , iyo sababta laygusoo daayayba.
1/11/2018 , Maalinnimo khamiis ah , Abbaare 11:20 duhurnimo ayay ahayd kolkii aan xilli dhalan-dhool ah aan uga anbabaxnay magaalada Boosaaso. Anniga iyo ergo Cuqaasha degaanka ah , gudanaynana waajib iyo masuuliyaddii ay shacabka soomaaliyeed noo igmadeen. Kuna sii jeednay degmada Baran ee gobolka Sanaag , oo ay ku sugnaayeenn gudigii nabadaynta iyo isimadii puntland , iyo kuwa soomaaliyaba. safarkayagan oo daarnaa maslaxad guud iyo nabadayntii shaqaaqadii ka dhacday dhawaan gobolkaas ee dilkii Marxuum Suldaan Xasan Cali jibriil , shirkaas oo runtii masaaliix badan ay kasoo baxday.
Kolkii aan gaarnay kantaroolka magaalada Boosaaso. Ayaa ciiddankii joogay iga hor istaageen in aan safarkaygii sii wato , laygunna amray in aan magaalada ka bixi karin , isla mar ahaantaasna ay amar u haystaan in lay xiro. Waxa aan fasaxay ergadii unna sheegay in ay iyagu safarkooddii sii wataan si ay usoo guttaan waajibka nabadayn ee shacabku u igmaday. Anniguna waxa aan soo raacay ciidankii waxa aynna ikeeneen saldhigga minjir oo uu taliye ka yahay xaamid salaad , isla mar ahaantaasna waa soo laabteen ciiddankii igeeyay. Soo dhawayn kaddib waxa ay i geeyeen qol ay markaas u arkaayeen qol munaasib ah , halkaas ayaan salaaddaydii duhur ku oogay , kunna qadeeyay. Muddo kolkii aan joogay qiyaas ahaanna saacaddu ahayd 1:40 Galabnimo.ayaa dhallinyaro carootay , kanna carootay sharci darrada lagu xiray. ay soo weerareen saldhiggii aan ku xirnaa , walloow uu taliyihii saldhiggaasi amray ciidankiisii in aysan u samayn wax iska caabbina isaga oo ula jeedkiisuna ahaa in aysan ka dhalan khasaaro badan. shaqaaqadan ayaa socotay ku dhawaad 30-daqiiqo , wax lays xabadeeyaba ugu dambayn waxa aan soo raacay wiilashii , waxa aynna i keeneen hoygii aan ka dagnaa magaalada. Kaddib iyagoo yaqiinsan in ay waajibkoodii gutteen ayay iga tageen.
Kolka ay xaaladdu halkaas maraysay ayaan go’aan ku gaaray in aan ku laabto meeshaydii , si aan u ogaado wixii laygusoo xiray , sifa sharci ahna ugasoo baxo saldhigga. Kolkaan tukaday ayaan gaari dalbaday , waxaanna soo aadnay saldhiggii. Waxa aan ka dagay gaarigii anniga oo wada qoryo ay lahaayeen ciidankii saldhigaas oo ay dhallinyaradii horey usii qaadatay awal. Waxaan waydiiyay inta qori ee ka maqan , waxa aynna iisheegeen intii qori aan gacanta ku hayay , waan ku wareejiyay kaddibna qolkaygii ayaan ku laabtay habeenkii jimcuhu soo galaayaynna u hoyday.
2/11/2018 , maalinnimo jimce ah , abbaare ku dhawaad 11:00-kii duhurnimo anniga oo isku diyaariyey oogidda salaada jimce ayaa waxaa iigu yimid qolkaygii taliye ku-xigeenka qaybta ,Axmed Abshir Axmed (Jaraalle) wuxuunna amar ku bixiyay in jeelka wayn oo loo yaqaan gaal-shire lay wareejiyo. Jeel jeel iima dhaammo , muhiimaddaydu waa in aan ogaado sababta laygusoo xiray , waan is raacnay waxaanna taayirka saarnay waddada sodonka ee marta Bariga magaalada Boosaaso , halkaas ayaannuna dhabarka dambe kasoo galnay jeelkii.
Waxa aanna kala kulmay madaxdii , saraakiishii , dablaydii iyo weliba maxaabiistiiba soo dhawayn aad u balaaran iyo galkacayl , oo aan runtii ka malaynaayay. Waxa aan ku faraxsanahay ilaahna ugu xamdi naqayaa in aan halkaas ka gaaray jamaacaddii salaadii jimce isla markaasna aan la kulmay khudbaddii oo socota , halkaas ayaana ku oogay. Kaddib waxaa lay siiyay degaan fiican oo aan dago alaabtaydana dhigto , waxa aanna jeelkaa wayn ku xirnaa 2-dii , 3-dii iyo weliba 4-tii bisha. Muddadaas oo aan soo dhawayn , qadarin iyo qiimaba leh ku haystay. Waxaana uga mahadcelinayaa madaxda iyo maxaabiista jeelkaas.
5 / 11 / 2018 , maallinimo isniin ah ayaa waxaa ii yimid guddoomiyaha gobolka yuusuf M. Wacays iyo duqa magaalada cabdisalaam Bashiir Cabdislaam iyo Cuqaasha degaanka oo wada socda. Halkaas oo ay iigu wergeliyeen in xoriyaddaydii dib lay siinayo , igana codsadeen in wixii dhacay ka raali ahaado. Waan ka ajiibay balse wali qanac buuxa kamaanan qaadan sababtii laysoo xiray balse waxa ay iilla muuqatay in shirarkii hore aan qabanay ee aan maamul goboleedyada aan kaga hadlaynay uu xarigaygu halkaas ku saabsannaa , waana nasiib darro in dastuurka puntland qodobkiisa 14-aad farqaddiisa 2-aad ay ku xusan tahay “Qofku waxa uu fikirkiisa ku cabbiri karaa qaab hadal , saxaafadeed , qoraal , muuqaal , suugaan iyo habab kalle oo sharciga waafaqsan “. Saas oo ay tahay anni ahaan iyo qof walboo dhamays ahi waxa uu dareemayaa in dastuurka aanan sidii loogu tala galay loogu dhaqmin.
MAXAYNNU KA BARANNAY 20-KII SANNO PUNTLAND ?.
Alle haynnoo siyaadiyo nabadda iyo xasiloonida ka jirta guud ahaan puntland , taasinna ma ahan mid micno la’aan ku timiye , waxaa har iyo habeen u taagnaa ciidan Difaaca. joogay iyo isimmo iyo nabadoonno aan ladi jirin. Maamul ama dowladi waa habdhis ka kooban unugyo habaysan oo xukuma, ilaaliya, xadeeya, xaliya, dabra dhamaan hab-dhaqanka bulsho meel kuwada nool waa dad leh dal cayiman oo uu ka jiro maamul ku dhisan sharci, lehna awood sharcigaa lagu fuliyo. Haykal ahaan Waxa ay ka kooban tahay Saddex rukun ama Waaxood oo waaweyn. Waax kastaa waxa ay qabataa shaqo u gaara. Waax kastaana way ka madaxbanaan tahay waaxda kale wallow xidhiidh wada shaqayneed ka dhexeeyo. Haddaan mid mid u sharaxo.
1. WAAXDA FULINTA : waa waaxda fulisa hawlaha dawlada, waana waaxda u qaabilsan in ay daboosho qabatana hawlaha bulshada , Waxaana hormuud u ah madaxweynaha.
2. WAAXDA XEER DEJINTA : Waa waaxda u qaabilsan dawlada dajinta, samaynta Xeerka iyo qawaaniinta dawlada lagu hagayo.
3. WAAXDA GARSOORKA : Waa waaxda u qaabilsan garsoorka, caddaalada, sinaanta iyo ilaalinta sharciga. Waana waax ka madax bannaan saan horey usoo xusnay laanta fulinta iyo xeer dejinta. Xittaa haddii madaxweynaha maamulkaas uu sharciga jabiyo waa mid qabata.
Saddexdaas waaxood marka ay si wacan u gutaan waajibaadkooda, fahmaan masuuliyada saran, ka shaqeeyaan sharciga iyo wixii Bulshadu isla garatay ama ku heshiisay, waxaa suuro gal ah, in la helo dawlad isku filan.
Haddaan intaas kaga baxo sharaxaadda aan u guda gallo muhiimadda hadalkayga , puntland waxa ay sheegatay in ay maamul tahay , haykalka laga rabo maamul ee aynnu kusoo xusnay korna waa mid ka jira in la sameeyona waa wax fiican balse waxaa nasiib darro ah in ay u badan yihiin maqaar saar. Oo 20-kii sanno ee lasoo dhaafay waxaa shaqaynaayay hal waax oo ah tan fullinta , labada kallena waa kuwa hawshii loo igmaday gabay , waxaanna lagu tilmaami karaa tan iyo waagii in ay dowladdu ahay mid dhinac ka raran , oo waxaa meesha ka maqnaa muddadaas waaxda garsoorka oo u madax bannaan shaqadeeda iyo waaxda xeer dejintaba. Saan wada ognahayna meel aan garsoor iyo sharci ka jirin caddaalad kama jirto , saan wada ognahaynna. Caddaaladu waa kasoo hor jeedka Dulmiga , waxa looga jeedaa wax kasta oo aan dulmi ahayni waa cadaalad. Haddii dulmi meesha soo galana cadaalada ayaa ka baxda. Islaamku Caddaalada meel sare ayuu gaarsiiyay , qiimaha iyo saraynta halka laga gaarsiiyayna waxa tilmaamaya waxa laga dhigay magac ka mida magacyadda alle ( العدل ) ilaahayna waa caadil, waxana uu jecelyahay cadaalada , magacyadiisana waxa ka mida Caadil. Caddaaladu inay ka mid noqoto magacyada alle waxay ku tusaysaa qaalinimadeeda iyo muhimada ay u leedahay dadka iyo dawladnimadaba , waxay ku tusaysaa caddaalad la,aan inaan la noolaan karin.
Haddaba sidaas oo ay tahay golaha garsoorku ma ahan kuwa u madax bannaan shaqadooda , balse magaca uun ayay ku kala duwan yihiin fullinta’e hal meel ayay ka fushaa talada iyo go’aanku , yacnii waa waax jeeb ku jirta , mana ahan sida sharciga ah waax shaqadeeda u madax-bannaan Waana tan sababtay in waaxda fulintu uu xeer qaban waayo.
Waaxda xeer-dejintunna 20-kaas sanno waxa ay ahayd siilad lagu kala dulaalo danta shacabka iyo hantida guud ee maguurtada ah. Waxa kallo oo ay ahayd meel biil laga dhacsado , lagana adeegto balse ma ahayn meel shacabka loogu adeego , waxaanna halkaas ku dhumay xiriirka shacabka iyo dowladda maadaama ay ahaayeen isku xirkii.
Waxa aan qabaa tallo ah in waax walba shaqadeeda aan lagu maamulin si madax iyo majaba xeerku u qabto , sharcigunna ka sareeyo dhammaan laamahaas , lana dhiso maxkamad dastuuri ah shaqadeedana u madax bannaan. Si loo helo kala dambayn , caddaalad iyo sinnaaanta ay bulshado baahida wayn u qabto.
Ugu dambayn waxa aan u mahadcelinayaa dhammaan ciddii ka xumaatay xarigaygii isimo , siyaasiyiin , aqoonyahan , dhallinyaro , haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sidoo kalle waxaan u mahadcelinayaa cuqaasha deegaanka , gudoomiyaha gobolka bari , duqa magaalada boosaaso , hay adaha xuquuqul iinsaanka oo halgan badan u galay xoriyaddayda oo ay ka mid yihiin human right watch , admest intranational , gudoomiyaha xuquuqul iinsaanka puntland pro maxamad yuusuf cali.
Xoriyaddayda dib ayaan u helay , illaa haddase wax caddayn ah oo aan ku xirnaa layma sheegin , taasina waxay caddayn u tahay inaan sharci daro ku xirnaa.
W/Q nabadoon cabdiqaadir axmed ibraahim (xarago ).
Guddoomiyaha nabadoonnada gobolka bari.